Saraakiisha loo doortay Holandtown iyo dhinaca koonfureed ee St. Louis • DutchtownSTL.org
Dutchtown waxaa u adeega tiro ka mid ah saraakiisha la soo doortay ee kala duwan ee heer magaalo, gobol, iyo heer federaal. Waxaan u soo uruurinnay macluumaad xiriir muhiim ah oo loogu talagalay dadkaaga khaaska ah, wakiillada gobolka, iyo inbadan.
Maaddaama ay tahay xaafad juquraafi ahaan ballaaran, xuduudaha degmada ee kala duwan waxay ka gooyeen Dutchtown dhinac kasta. Meesha la heli karo, waxaan ku darnay xiriiriyeyaal khariidado iyo cinwaannada cinwaannada si aad u xaqiijiso inaad la xiriirto wakiilkaaga la soo doortay.
Guddiga Louis ee Aldermen
Qaybaha Aldermanic ee ku yaal Dutchtown.
Guddiga Aldermen waa hay'adda sharci dejinta ee St. Magaalada waxay u qaybsan tahay 28 waaxood, mid walbana waxaa matalaya hal aqoonyahan. Tani waxay u shaqeysaa qiyaastii 10,000 oo qof oo uu wakiil ka yahay qof kasta oo kale. Ku dhowaad 30,000 oo deggan xaafadda Greater Dutchtown, layaab malahan in naloo matalo dhowr mas'uul oo kala duwan.
Ogeysiis Ku Saabsan La Xiriirka Alderman-kaaga
In kasta oo aan dooranayno raggeenna hoose si ay noogu adeegaan sidii deganeyaal iyo milkiileyaal ganacsi, mararka qaarkood waxaa jira wadiiqooyin ka wanaagsan oo lagu raadsado caawimaadda arrimaha xaafaddaada. The Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta oo aad Khabiirka Horumarinta Xaafadaha labaduba waxay si toos ah ula shaqeeyaan waaxaha magaalada si ay uga caawiyaan xalinta arrimaha. Haddii aad weli dhibaatooyin hayso, waxaad la xiriiri kartaa alderman-kaaga si uu u dhexgalo.
Waxaan haynaa hagitaanno ballaaran oo kaa caawiya la xiriir CSB iyo la shaqee NIS-kaaga halkan ka joog DutchtownSTL.org.
Xaafada Greater Dutchtown waxay ka mid tahay awooda shan waaxood oo kala duwan. Haddii aadan hubin qaybta aad ku jirto, eeg cinwaankaaga bogga Magaalada St. Louis.
The 25aad Ward of St. Louis wuxuu daboolayaa dhul ballaaran oo Dutchtown ah, gaar ahaan galbeedka, bartamaha, iyo qaybaha koonfureed ee xaafadda. Downtown Dutchtown agagaarka Virginia iyo Meramec waxay ku yaalliin xaafadda 25-aad.
Ald. Shane Cohn25aad Ward
Ald. Shane Cohn wuxuu matalayay xaafadda 25-aad tan iyo 2009, markii uu noqday qofkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u doorta mas'uuliyiinta khaniisiinta ee taariikhda St. Ald. Kuraasta Cohn ee Guddiga Gaadiidka iyo Ganacsiga oo ku dul fadhiya Guriyeynta, Horumarinta Magaalooyinka, iyo Gudiga Aaga iyo sidoo kale Shaqaalaha Dawladda iyo Shaqaalaha iyo Maamulka Guddiyada. Markuu galayo xilli-ciyaareedkiisii ​​afraad 2021 wuxuu noqonayaa mid ka mid ah xubnaha darajooyinka sare ee Guddiga.
Waad gaari kartaa Ald. Xafiiska Cohn ee Hall Hall adoo wacaya (314) 622-3287. Cinwaanka emaylkiisa magaalada waa cohns@stlouis-mo.gov.
St. Louis's 20aad Ward wuxuu kaloo daboolayaa qayb ballaaran oo ka mid ah xaafadda Dutchtown. Inta badan xaafadda Dutchtown ee woqooyiga Meramec Street waxay ku dhacdaa xaafadda 20aad, sidoo kale dhammaan Gravois Park (oo ay ku jiraan dhinaca koonfureed ee Cherokee Street ee galbeedka Jefferson), qayb weyn oo ka mid ah Marine Villa, iyo siibashada Mount Pleasant.
Ald. Cara Spencer20aad Ward
Xaafadda 20aad waxaa matalaya Ald. Cara Spencer. Ald. Spencer waxaa la doortay 2015 waxaana dib loo doortay 2019. Waxay gudoomisaa Golaha Aldermen Gudiga Arimaha Dowladaha oo ku dul fadhiya Shaqaalaha Dawladda, Badbaadada Dadweynaha, Iyo Siyaabaha iyo Hababka Guddiyada.
Ald. Spencer waxaa laga heli karaa telefoonka at (314) 622-3287 ama email ahaan spencerc@stlouis-mo.gov.
Ald. Dan Guenther9aad Ward
The 9aad Ward waa mid ka mid ah qaybaha gaarka u qaabaysan ee St. Louis, qalooca oo dhan laga soo bilaabo xaafadda Soulard ilaa woqooyi iyo ilaa xaafadda Greater Dutchtown. Qeybo ka mid ah Marine Villa iyo inta badan Mount Pleasant ayaa lagu soo daray aagga 9aad ee Ward, iyo midka 9aad wuxuu sidoo kale ka kooban yahay waddo dheer oo Cherokee Street ah.
Ald. Dan Guenther wuxuu bilaabay u adeegida xaafada 9aad markii la doortay 2017 waxaana dib loo doortay 2021. Wuxuu gudoomiye ka yahay guddiga Aldermen's Guddiga Shirweynaha iyo Dalxiiska iyo sidoo kale u adeegida Ku lug lahaanshaha, Xeerarka, Go'aamada iyo Aqoonsiyada, Adeegyada Caafimaadka iyo Dadka, Iyo Horumarinta Xaafadaha Guddiyada. Waxaad la xiriiri kartaa Ald. Guenther at (314) 622-3287 or guentherd@stlouis-mo.gov.
Qaybaha 11aad iyo 13aad
Ald. Sarah Martin11aad Ward
Ald. Anne Schweitzer13aad Ward
Magaalada 11aad Ward iyo 13aad Ward daboolo qaddar yar oo ku yaal dhinaca koonfureed ee xaafadda Greater Dutchtown. Midka 13aad wuxuu degan yahay aagga u dhow Dugsiga Sare ee St. Mary iyo labada qaybood ee koonfurta ee Degmada St Cecilia Historic, iyadoo waaxda inteeda badani u fidsan tahay dhinaca galbeed oo lagu darayo Bevo iyo Princeton Heights iyo xaafado kale. Tan 11-aad waxaa ku jira dhammaadka koonfureed ee Mount Pleasant, laakiin inta badan waxay dabooshaa Carondelet, Patch, iyo xaafadda Holly Hills.
Qaybta 11aad waxaa ka shaqeeya Ald. Sarah Martin. Ald. Martin wuxuu ku guuleystey xilkeedii ugu horeeyey sanadkii 2017. Lambarka taleefankeeda xafiis waa (314) 622-3287 cinwaanka e-maylkeeduna waa martins@stlouis-mo.gov.
Ald. Anne Schweitzer waxay u adeegtaa xaafadda 13aad tan iyo markii ay ku guuleysatay doorashadii 2021. Waa lagala xiriiri karaa (314) 622-3287 or Schweitzera@stlouis-mo.gov.
The Guddiga Aldermen is Lewis Reed, oo hayey jagada tan iyo 2007. Gudoomiyaha Gudiga ayaa hogaamiya Gudiga wuxuuna kamid yahay sadexda xubnood ee Guddiga Qiyaasta iyo Saamaynta, kuwa kalena ay yihiin duqa magaalada iyo maareeyaha guriga. Guddiga E&A wuxuu ugu dambeyntii mas'uul ka yahay miisaaniyadda sanadlaha ah iyo kharashaadka magaalada.
Xafiiska Madaxweynaha Reed waxaa lagala xiriiri karaa emayl ahaan reedl@stlouis-mo.gov ama adiga oo waca (314) 622-4114.
Saraakiisha kale ee la doortay ee St.
Tiro kale oo mas'uuliyiin ah ayaa la doortaa waxayna ka shaqeeyaan xafiisyada magaalada oo dhan.
Dabcan, qofka ugu caansan magaalada loo doortay mas'uulka waa sare. Duqa magaalada Tishaura O. Jones la doortay bishii Abriil ee 2021 ka dib markii uu u shaqeynayay sidii qasnajiga magaalada iyo wakiil ka socda gobolka Missouri sannado badan ka hor.
Duqa magaalada Tishaura O. Jones
Duqa magaalada Jones ayaa ku fadhiya saddexda xubnood Guddiga Qiyaasta iyo Saamaynta kaasoo mas'uul ka ah ansixinta miisaaniyadda iyo qoondaynta magaalada. Duqa magaalada ayaa sidoo kale magacaaba madax waaxeedyada guud ahaan magaalada, go'aaminta doorka muhiimka ah ee badbaadada dadweynaha, jidadka, beeraha nasashada, iyo caafimaadka iyo adeegyada aadanaha iyo dhowr kale.
Xafiiska Duqa magaalada waxaa laga heli karaa telefoon ahaan (314) 622-3201. Waxaad awoodi kartaa halkan kala xiriir Xafiiska Duqa Magaalada.
Magaalada comptroller waa Madaxa Sarkaalka Maaliyadeed ee St. Daryeelaha Darlene Green wuxuu xilka hayey ilaa 1997 wuxuuna dhowaan gaari doonaa taariikhada rubuc qarniga.
Xafiiska Kormeeraha ayaa maamula dhaqaalaha magaalada oo ay ku jiraan hantida, deynta, deeqaha, iyo mushahar bixinta. Xafiiska sidoo kale wuxuu mas'uul ka yahay xisaabinta iyo warbixinta maaliyadeed. Kontrollerler waa mid kale oo ka mid ah saddexda xubnood ee Guddiga Qiyaasta iyo Saamaynta, sameynta go’aamo dhaqaale oo muhiim u ah magaalada.
The Xafiiska Ururinta Dakhliga waxay uruurisaa canshuuraha guryaha, canshuuraha guryaha shaqsiyadeed, iyo canshuuraha dakhliga, iyo sidoo kale biyaha iyo diidmada lacagaha biilka. Siyaasiga magaalada dheer Gregory FX Daly ayaa buuxisay booska ilaa 2006.
The Xafiiska Shati-qaataha waxay soosaartaa rukhsadaha ganacsiga waxayna aruurisaa khidmadaha iyo canshuuraha ganacsiyada. Mavis Thompson waxaa loo doortay jagada 2014 waxayna hada mareysaa mudo xileedkeedii labaad.
The Xafiiska Diiwaanka Falalka waa ilaaliyaha diiwaanka magaalada oo ay ku jiraan diiwaanka dhulka sida ficillada iyo cinwaanada, shahaadooyinka dhalashada iyo dhimashada, rukhsadaha guurka, iyo dukumiintiyada taariikhiga ah. Diiwaan Geliyaha hadda socda waa Michael Butler, oo la doortay 2018.
Masuuliyiinta la doortay ee Gobolka Missouri
Golaha Wakiilada Missouri
Sida Gudiga Aldermen, xaafada Greater Dutchtown waxay ku baahsan tahay degmooyin badan oo guryo dawladeed ah. Iyadoo ay wakiilo ka yihiin 163 daafaha gobolka oo matalaya ku dhowaad 37,000 oo deggeneyaal ah, degmooyinkeena magaaladan cufan ayaa is haysta. Ku dhowaad tobaneeyo degmo ayaa daboolaya qaybo ka mid ah St.
Waxaad ka heli kartaa khariidadaha degmadaada Websaydhka Xafiiska Maamulka ee Missouri, ama ka hel Wakiilkaaga Gobolka ee Websaydhka raadinta cinwaanka.
Golaha Degmada 78
Wakiilka Rasheen Aldridge78-Degmo
Degmada 78aad ee Missouri waxay ku fidsan tahay wabiga St. Louis ee dhanka Woqooyi u Dhaw, Guud ahaan Magaalada, iyo koonfurta ilaa Dutchtown. Waqooyiga-bari Dutchtown, inta badan Gravois Park, iyo qayb ka mid ah Marine Villa waxay ku yaalliin degmada.
Wakiilka Rasheen Aldridge wuxuu matalayaa degmada 78aad kadib markii uu ku guuleystey doorasho gaar ah sanadka 2019 isla markaana loo doortey mudo dhan sanadka 2020. Waxaad ku soo diri kartaa emayl ahaan Rasheen.Aldridge@house.mo.gov ama wac xafiiskiisa magaalada Jefferson City at (573) 751-2383.
Golaha Degmada 81
Wakiilka Steve ButzDegmada 81aad
Degmada 81-aad waxaa ku jira inta badan xaafadaha Dutchtown ee saxda ah, Marine Villa, Mount Pleasant, iyo jileecyada Gravois Park. Degmadu waxay kaloo daboolaysaa qaybo muhiim ah oo ah Holly Hills, Bevo, iyo Carondelet oo ka tirsan waaxda koonfur-bari ee St.
Wakiilka Degmada 81aad waa Wakiilka Steve Butz, markii hore la doortay 2018. La xiriir xafiiskiisa at (573) 751-0438 ama emayl ugu soo dir Steve.Butz@house.mo.gov.
Golaha Degmada 80
Wakiilka Peter Meredith80-Degmo
Iyagoo daboolaya qayb yar oo ka mid ah Dutchtown galbeedka Grand iyo waqooyiga Meramec, Degmada 80aad waxay inta badan ku wajahan tahay agagaaraha Tower Grove South, Shaw, iyo Southwest Garden xaafadaha.
Wakiilka Peter Meredith wuxuu matalaa Degmadii 80aad tan iyo markii la doortay 2016. La xiriir xafiiskiisa at (573) 751-6736 or Peter.Merideth@house.mo.gov.
Marka loo barbardhigo degmooyinka Guryaha, degmooyinka gobolka senate-ka juqraafi ahaan way ka ballaadhan yihiin. Kaliya labo degmo oo senator ah ayaa daboolaya Magaalada St. Louis, oo leh dhamaan Greater Dutchtown oo lagu daray Kilinka 5aad.
Golaha Degmada 5
Sen. Steven Roberts5-Degmo
Kililka Shanaad ee Gobolka Missouri wuxuu daboolayaa sedex meelood labo meel magaalada St. Louis oo ay kujiraan dhamaan Dutchtown, Gravois Park, Mount Pleasant, iyo Marine Villa. Degmadu waxay ka bilaabmaysaa xaafadda Baden dhinaca woqooyi ee magaalada ilaa laga gaadhayo xadka magaalada koonfureed.
Sen. Steven Roberts, oo la doortay 2020, wuxuu matalaa Degmadda 5aad ee Magaalada Jefferson. Waxaad kala xiriiri kartaa xafiiskiisa (573) 751-4415 ama iyada oo loo marayo an foomka xiriirka khadka tooska ah.
Saraakiisha la soo doortay ee Gobolka oo dhan
Gudoomiyaha gobolka Missouri waa Gov. Mike Parson. Markii hore Lieutenant Governor, wuxuu galay jagada kadib iscasilaadii gudoomiyihii hore ee 2018, kadib waxaa la doortay sanadka 2020. Xafiiska Gudoomiyaha waxaa laga heli karaa (573) 751-3222 ama iyada oo loo marayo an foomka xiriirka khadka tooska ah.
Xeer Ilaaliyaha Guud
The Xeer ilaaliyaha guud ee Missouri waa Eric Schmitt. Xeer ilaaliyaha guud wuxuu gacanta ku hayaa arrimaha madaniga ah oo ay ka mid yihiin ilaalinta macaamiisha, iyo sidoo kale arrimaha dambiyada ee heer gobol. Kala xiriir xafiiska magaalada Jefferson halkan (573) 751-3321, ama xafiiska xaafadooda St. Louis ee (314) 340-6816. Isgaarsiinta elektiroonigga ah, booqo Bogga xiriirka Xeer ilaaliyaha Guud.
Sec. Jay Ashcroft waa Xoghayaha Gobolka Missouri. Xafiiska Xoghayaha Gobolka wuxuu hayaa arrimo badan oo kala duwan oo khuseeya doorashooyinka, adeegyada ganacsiga, iyo diiwaangelinta. La xiriir Xoghayaha Arimaha Dibadda (573) 751-4936 or info@sos.mo.gov. Tiro ka mid ah xiriirada gaarka ah ee waaxda ayaa laga heli karaa Shabakada SoS.
Saraakiisha kale ee la doortay ee Missouri
Saraakiisha la soo doortay ee heer federaal
Heerarka ugu sarreeya ee dowladda wakiillada waa mas'uuliyiinta la soo doorto ee federaalka oo ay ku jiraan wakiillada koongareeska, guurtida, iyo madaxweynaha.
1aad Wakiilka Degmada Cori Bush
Xildhibaan Cori BushDegmadda 1aad ee Kongareeska
Xildhibaan Cori Bush waxaa loo doortay guushii murugada badneyd ee mudada dheer xilka haysay si uu u matalo Degmada 1aad ee Kongareeska ee Missouri sanadka 2020. Degmada 1-aad waxay dabooleysaa guud ahaan Magaalada St. Louis.
Rep Bush wuxuu xafiisyo ku leeyahay Washington DC iyo St. Louis labadaba. Waxaad ka heli kartaa xafiiska deegaanka ee (314) 367-1970 ama wac xafiiska Washington (202) 225-2406. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa la xiriir xafiiska Rep. Bush iyada oo loo marayo degelkeeda.
Senetarada waxaa loo doortaa inay matalaan gobolkooda oo dhan. Missouri waxay leedahay laba senator, Sen. Roy Blunt iyo Sen. Josh Hawley.
Xafiiska Sen. Blunt ee St. Louis xafiiskiisa ayaa lagala xiriiri karaa (314) 725-4484. Xafiiska Washington DC waxaa laga heli karaa (202) 224-5721. Waxa kale oo jira tiro ka mid ah xulashada xiriirka bogga guurtida.
Sen. Hawley waxaa lagala xiriiri karaa xafiiska deegaanka ee (314) 354-7060 ama Washington at (202) 224-6154. Sidoo kale waxaad kala xiriiri kartaa xafiiska Sen. Hawley adoo adeegsanaya isaga website.
Madaxweyne Joseph Biden waxaa la caleema saaray Janaayo 20, 2021. Si aad fikrado ugu dirto xafiisyada Aqalka Cad, waad wici kartaa (202) 456-1111, ama waxaad ka gaari kartaa badhanka barta (202) 456-1414. Aqalka Cad wuxuu kaloo leeyahay foomka xiriirka khadka tooska ah.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay July 13th, 2021 .
DutchtownSTL.org Kheyraadka Xaafada Dutchtown Saraakiisha Lagu Soo Doortay Magaalada Dutchtown